(ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ၊ ပဲလွမ်းသီးနှံ)
ပဲတီစိမ်း မတ်ပဲ ပဲလွမ်း
မြန်မာအမည် - ပဲတီစိမ်း - မတ်ပဲ - ပဲလွမ်း
အင်္ဂလိပ်အမည် - Green gram - Black gram - Cowpea
သိပ္ပံအမည် -Vigna radiata (L.) -Vigna mungo (L.) -Vigna sinensis
မျိုးရင်း - Leguminaceae - Leguminaceae - Leguminaceae
မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌ ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧကစုစုပေါင်း (၁၁.၅) သန်းရှိပြီး မိုးပဲမျိုးစုံ (၄.၀၄ဧကသန်း)၊ ဆောင်းပဲမျိုးစုံ (၇.၄၇ဧကသန်း) စိုက်ပျိုးပြီး စုစုပေါင်း ပဲမျိုးစုံအထွက် မက်ထရစ်တန်ချိန် (၆.၃၇၇သန်း) ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့၍ နိုင်ငံခြားသို့ မက်ထရစ်တန်ချိန် (၁.၂၃သန်း) တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပဲမျိုးပေါင်း (၁၈) မျိုး ခန့် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပြီး(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် ပဲတီစိမ်းစိုက်ဧက(၂.၉၉သန်း) ၊ မတ်ပဲ စိုက်ဧက (၂.၈သန်း) ၊ ပဲလွမ်းစိုက်ဧက (၀.၃၅သန်း) စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပဲတီစိမ်းသီးနှံကို မိုးရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ၊ မိုးကြိုရာသီများ၌ စိုက်ပျိုးပြီး မတ်ပဲ၊ ပဲလွမ်းသီးနှံများကို ‌ဆောင်းရာသီတွင် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။
ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီ၍ ဒေသရေမြေရာသီဥတုနှင့် သင့်လျော်သည့် ပဲမျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ အသုံးပြုရမည်။ စိုက်ပျိုးမည့်သီးနှံမျိုးနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ သည် ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှု အနည်းဆုံးဖြစ်သင့်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့နည်း စေနိုင်မည့် နည်းစနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုဆောင်ရွက်ရမည်။
စိုက်ပျိုးမြေနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေသည် ဓါတုနှင့် ဇီဝဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ရှိသည့် မြေအမျိုးအစားမျိုးမဖြစ်စေရ။ စိုက်ကွင်းမြေပုံနှင့် မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။
ပဲတီစိမ်းသီးနှံဖြစ်ထွန်းရန်အတွက် မြေအချဉ်ငံဓာတ် (၆.၅ မှ ၇.၅) ရှိသော မြေမျိုး လိုအပ်ပြီး မတ်ပဲသီးနှံဖြစ်ထွန်းရန်အတွက် မြေအချဉ်ငံဓာတ်( ၆.၅ မှ ၇.၀) ရှိသော မြေမျိုး တွင် စိုက်ပျိုးရပါမည်။ မြေအချဉ်ငံဓာတ် (၅.၅) ထက်နိမ့်သော မြေမျိုးတွင် စိုက်ပါက အပင် ဖြစ်ထွန်းမှု ညံ့ဖျင်းပါသည်။ ဆားပေါက်သောမြေများတွင် မစိုက်ပျိုးရပါ။ ရေသွင်းရေထုတ် လွယ်ကူသည့် မြေဖြစ်ရမည်။
ပဲတီစိမ်းနှင့် မတ်ပဲဖြစ်ထွန်းရန် မိုးရွာသွန်းမှုတစ်နှစ်ပျမ်းမျှ (၂၀"မှ ၅၀") အတွင်း ရှိရန်လိုအပ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက်ပေ (၆၀၀၀) အထိ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
ပဲတီစိမ်းဖြစ်ထွန်းရန် အပူချိန်(၂၀-၄၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လိုအပ်၍ မတ်ပဲဖြစ်ထွန်းရန် (၂၅-၃၅) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်း လိုအပ်ပြီး နေရောင်ခြည်ကောင်းစွာရရှိရန် လိုအပ်ပါ သည်။ ပဲလွမ်းသီးနှံသည် အကြမ်းခံပြီး မြေမရွေးဖြစ်ထွန်းနိုင်၍ ရေသွင်းရေထုတ် ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးမည့်မြေနေရာသည် ဆေးရုံဆောက်ခဲ့သည့်နေရာ၊ တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သောနေရာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နေရာ၊ မြူနီစပယ်မှ အမှိုက် စွန့်ပစ်ခဲ့သောနေရာများ မဖြစ်စေရ။ မြေပြုပြင်ရာတွင် ထယ်ရေးနက်၍ ထွန်ရေးညက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေကို စနစ်တကျသုံးစွဲရမည်။
- အသုံးပြုမည့်ရေကို လိုအပ်ပါက ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ပြီး သီးနှံနှင့်သင့်တော်မှုရှိရမည်။
- မွေးမြူရေးဇုံ၊ ဆေးရုံ၊ စက်ရုံများမှ ဖြတ်သန်းလာသောရေ၊ မြူနီစပယ်စွန့်ပစ် ရေများ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ရေများကို အသုံးမပြုရ။
- ရေမြေဒေသနှင့် ကိုက်ညီပြီး ပိုးမွှားရောဂါ ကင်းစင်သည့် အရည်သွေးကောင်း မျိုးများကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
- ထုတ်ပြန်ထားသည့် မျိုးစေ့ဥပဒေကို လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်။
- အပင်ပေါက်(၈၅%)အထက်ရှိသည့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ စိုက်ပျိုးသင့်သည်။
- မျိုးစေ့ဆောင်ရောဂါများ ပါဝင်မှုမရှိစေရ။
- ရာသီဥတုဒါဏ်၊ ပိုးမွှားရောဂါဒါဏ်ခံနိုင်သော မျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသင့် သည်။
- မျိုးစေ့ဝယ်ယူရရှိသည့် ဒေသ၊ ရရှိသည့်အရေအတွက်၊ ရရှိသည့်နေ့စွဲနှင့် ရောင်းချသူအမည်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်။
- စိုက်ပျိုးမည့်မြေဆီလွှာ၏ အာဟာရပါဝင်မှု သိရှိနိုင်ရန် စစ်ဆေးသင့်သည်။
- မြေဆီလွှာဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုကို အခြေခံ၍ ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ၊ ပဲလွမ်းသီးနှံအတွက် လိုအပ်သည့် မြေသြဇာနှင့် မြေဆီလွှာဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသင့်သည်။
- လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး ​ခြေဖျက်ရန်ခက်ခဲသည့် ဓါတ်သတ္တု များ (Heavy Metal)နှင့် အခြားအဆိပ်သင့်ပစ္စည်းများ မပါဝင်သော အသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြေသြဇာများကိုသာ အသုံးပြုရမည်။
- စိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံတစ်ခုချင်းစီအတွက် အသုံးပြုသည့်မြေသြဇာ (သို့) မြေဆီလွှာ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဓါတုနှင့်ဇီဝဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရ။
- မြေတွင်းအောင်းပိုးနှင့် ပင်စည်ထိုးပိုးကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန် ဖြူရာဒန် (၃-၆) Kg ကို စိုက်ကြောင်းတွင် ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးသင့်သည်။
- မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးများ အသုံးပြုရာတွင် ပဲမြစ်ဖုဇီဝမြေသြဇာနှင့် မှိုသတ်ဆေး များကို တစ်ချိန်တည်း ရောနှောအသုံးမပြုရ။
- မျိုးစေ့ဆောင်ရောဂါများကာကွယ်ရန် မှိုသတ်ဆေးများကို (စိုက်ပျိုးချိန် စိုက်ကြောင်းတွင်ထည့်၍) စိုက်ချိန်တွင် ပဲမြစ်ဖုမြေသြဇာနှင့် လူးနယ်စိုက်ပျိုး သင့်သည်။
- မြေကြီး၏ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိနှင့် ဓါတ်ဂုဏ်သတ္တိများ တိုးပွားစေရန် ကောင်းစွာ ဆွေးမြေ့နေသော သဘာဝမြေသြဇာနှင့် သစ်စိမ်းမြေသြဇာများကို တစ်နှစ်လျှင် (၃-၅) တန်အထိ နှစ်စဉ်ထည့်သွင်းပေးသင့်သည်။
- ကောင်းစွာဆွေးမြေ့နေသော သဘာဝမြေသြဇာနှင့် သစ်စိမ်းမြေသြဇာများကို နှစ်စဉ်ထည့်သွင်းပေးခြင်းသည် မြေကြီး၏ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိကို တိုးပွားစေပါသည်။
- သီးနှံအကြွင်းအကျန်များကို မြေဆွေးအဖြစ် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ရောဂါ ကင်းသည့် အပင်ကြွင်းအပင်ကျန်များကိုသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
- မြေဆီလွှာသုံးစွဲခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းများ ထားရှိ ရမည်။
- မြေသြဇာ (သို့မဟုတ်) မြေဆီလွှာဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ ရောနှောခြင်း၊ သိုလှောင် ခြင်း၊ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ဆွေးမြေ့စေရန် ဆောင်ရွက်မည့်နေရာသည် မြေနှင့်ရေအရင်းအမြစ် သန့်ရှင်းမှုကို ထိခိုက်စေသောနေရာများ၌ မပြုလုပ်ရ။
- မြေသြဇာ(သို့မဟုတ်) မြေဆီလွှာဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ၏ ရရှိသည့်ဒေသ၊ ရရှိ သည့်အရေအတွက်၊ ရရှိသည့်နေ့စွဲနှင့် ရောင်းချသူအမည်တို့ကို မှတ်တမ်းထား ရှိရမည်။
- ဓါတုဆေးများအသုံးပြုမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေး စနစ်များကို အသုံးပြုသင့်သည်။
- တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းထားသော အပင်ထွက်ပိုးသတ်ဆေးနှင့် အဏုဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးများကို သုံးသင့်သည်။
- ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ၊ မြေသြဇာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေရေးကို အထူး ဂရုပြုရမည်။
- ဓါတုဆေးများကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု မှတ်ပုံတင် ထားသည့် ဓါတုဆေးများကိုသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
- ဆေးဖျန်းပြီးနောက် ဆေးအုပ်စုအလိုက် မရိတ်သိမ်းမီ စောင့်ဆိုင်းရမည့် ရက်ကာလ အပိုင်းအခြားကို အတိအကျလိုက်နာရမည်။
- ပိုးသတ်ဆေး စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနည်းများကို သိရှိနားလည်ထားရမည်။
- ဓါတုဆေးများဝယ်ယူ၊ သိုလှောင်၊ သုံးစွဲမှု၊ အသုံးချမှုနှင့်စွန့်ပစ်မှုတို့ကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်၍ မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်။
- လောင်စာဆီ၊ ချောဆီနှင့် အခြားသောစိုက်ပျိုးရေးသုံးမဟုတ်သည့် ဓါတုဆေး များကို သီးနှံများညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ် အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
၆။ အပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
အရည်အသွေးကောင်း ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ၊ ပဲလွမ်းစိုက်ပျိုးရန် အောက်ဖော်ပြပါနည်း
- ပဲတီစိမ်းနှင့်မတ်ပဲ၏ တစ်ဧက မျိုးစေ့နှုန်းထားသည် အတန်းလိုက် စိုက်ပျိုးမည် ဆိုပါက မိုးရာသီတွင်(၄-၆)ပြည်၊ ဆောင်းရာသီတွင် (၆-၈)ပြည် လိုအပ်ပါသည်။ ပဲလွမ်းသီးနှံမှာ တစ်ဧက (၈-၁၂)ပြည် လိုအပ်ပါသည်။
ဖတ်ပြီးသည့် အကြိမ်အရေအတွက်: 4247
Myanmar National Food and Agriculture SystemsProject Environmental and Social Management Framework (Updated DRAFT)
ဒုတိယဦးစီးမှူး (စိုက်ပညာရှင်)ရာထူးသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားရေးအတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
စပါးမျိုးစေ့သန့်စင်စက်လုပ်ငန်းအတွက် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းမည့် လျှောက်လွှာတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားခြင်း။
Myanmar Natioal Food and Agriculture Systems Project Environmental and Social Management Framewordk (DRAFT) marrch,2020
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး(စိုက်ပညာရှင်)ရာထူးသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားရေးအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့်သူများစာရင်း
မြန်မာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း Myanmar National Food and Agriculture System Project (NFASP) ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင်အနှစ်ချုပ်အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း။
Date 27/06/2019Loan/Grant No. and Title; Loan No. 3724-MYA, Grant No. 0617-MYA: Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project